कांग्रेस महाधिवेशन सर्ने निश्चित, कहिलेसम्म सर्न सक्छ अधिवेशन ? « Bikas Times
कांग्रेस महाधिवेशन सर्ने निश्चित, कहिलेसम्म सर्न सक्छ अधिवेशन ?
पछिल्लो समय चुलिएको राजनीतिक उतारचढाव,कोरोना भाइरस, र पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवले भर्खर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लिएका कारण समयमा नै महाधिवेशन सम्भव नभएको हो ।
‘वडा अधिवेशन २८ वा २९ साउनमा सुरु गर्ने, त्यो अवस्थामा २७ भदौबाट केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ तर भदौभित्रै महाधिवेशन हुन्छ । बढ्दो कोरोना महामारी सँगै राजनीतिक अस्थीता बीच अहिले कांग्रेसले चुनाव गर्नै पर्ने अवस्था रहेको छ ।